निर्माणाधीन घर तोडफोड
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा अज्ञात समूहले मुक्त हलियाका निर्माणाधीन घरहरुमा तोडफोड गरेको छ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर २ मा निर्माणाधीन १५ वटा घरमा तोडफोड गरी १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति पुर्याइएको हो । तीमध्ये सात वटा घर पूर्णरुपमा भत्काउँ“दा हलिया परिवार समस्यामा परेका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिवी लुहारका … Read more
हस्तान्तरण नहुँदै सडक भत्किन लाग्यो
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८, फूलबारी क्याम्पस जाने सडक हस्तान्रण नहुदै केही स्थानमा भत्किन लागेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा स्वीकृते सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र २० वटा सडक निर्माण भइरहेका छन् । फूलबारी क्याम्पस जाने सो सडक पाँच सय ३० मिटर लामो र सात मिटर चौडाईको रहेको छ … Read more
सुदूरपश्चिम आर्थिक विकासमा अझै पछि : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई (भिडियाे)
धनगढी । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सुदूरपश्चिममा आर्थिक विकास नहुन नसकेको बताएका छन् । पार्टीको जनसम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न गरी काठामाडौं फर्किरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले धनगढी विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै रोजगारी र आर्थिक विकासमा सुदूरपश्चिम अझै पछि रहेको बताएका हुन् । उनले अभियानको क्रममा आफूले सुदूरपश्चिममा सडक विकास भएपनि रोजगारी र … Read more
ओलीले भन्दैमा गोदावरीमा प्रदेश राजधानी हुँदैन : पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा
धनगढी । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गोदावरी–२ र ४ मा पर्ने वनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी बन्न नसक्ने बताएका छन् । प्रेस कैलालीले बिहिबार धनगढी विमानस्थलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले उपयुक्त भन्दैमा गोदावरीमा राजधानी नबन्ने बताएका हुन् । उनले खाली ठाउँ नरहेको र वन क्षेत्र रहेको हुनाले गोदावरीमा … Read more
स्थानीयको माग– पुनः सिमा सर्भे गरियोस्
धनगढी । ‘दश वर्षअघि मैले जहाँ विरुवा रोपे, हुर्काएर ठुलो बनाए । अहिले त्यही ठाउँ परायाकोमा जाने भयो’ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का बासिन्दा दिनेशराज सुवेदीले नेपाल भारत सीमा सर्वेक्षण टोली नम्बर ४ संग निरासामिश्रित आक्रोस व्यक्त गरे । नेपाल भारतको सीमाना छुट्याउने मुख्य पिल्लर नम्बर ७४२ र सहायक पिल्लर ७४१÷८ नम्बरको पिल्लरको सिमा … Read more
जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सामाग्री हस्तान्तरण
धनगढी । गैरसरकारी संस्था फाया नेपालले बुधबार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्वर १ र १० मा बिपद जोखिम न्यूनिकरण गर्ने आवश्यक पर्ने सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख हरिसिंह साउद र उपप्रमुख रत्ना कडायत मार्फत विपद सामाग्रीहरु वडा नम्वर १ र १० का वडा अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । फाया नेपालले वडा नम्वर … Read more
मन्त्री अधिकारीका परिवारलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीले दिए समवेदना (फोटोफिचर)
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीका परिवारलाई भेटेका छन्। बुधबार साँझ ललितपुरकाे पुल्चाेकस्थित मन्त्री क्वार्टर पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले परिवारलाई समवेदना प्रकट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीकाे निजी सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पाेखरेल, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल, खानेपानी मन्त्री विना मगरलगायत … Read more
काठमाडाैं । ताप्लेजुङमा भएको हेलिकाेप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाकाे निधन भएको छ। फुङलिङ नगरपालिका-१०, काफ्लेपाटी (फुरुङ्गे सिस्नेखोला) नजिकैको तारेढुंगा भीरमा दिउँसो साढे १ बजे हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनास्थलमा ७ जनाकाे शव फेला परेकाे हेली साेसाइटी अफ नेपालका एक प्रतिनिधिले पुष्टि गरे। फुङलिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख बमबहादुर भट्टराई ‘तारा’ले पनि मृतकमध्ये ५ जनाकाे शव फेला परेकाे पुष्टि गरे। ‘दुर्घटना भएकाे जानकारी … Read more
आजदेखि हात्तीपाइले रोग विरुद्ध औषधी खुवाइँदै
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा आज (बुधबार) देखि हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी खुवाइने भएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरको कुल जनसंख्यामध्ये १३ लाख ५२ हजार सात सय १७ जनसंख्यालाई यस वर्ष हात्तीपाईले रोगविरुद्धको औषधी सेवन गराउने लक्ष्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । कैलालीको नौ लाख २१ हजार एक सय … Read more
सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रमा भारी हिमपात, जनजिव कष्टकर (फोटो फिचर)
बैतडी । बैतडी लगायत सुदूरपश्चिमका उच्च लेकाली क्षेत्रमा लगातारको हिमपातले यहाको जनजिवन कष्टकर बनाएको छ । बैतडी, दार्चुला, बझाङ्, डडेल्धुराका उच्च भेगमा हिमपात भएसँगै जनजिवन कष्टकर बनेको हो । बैतडीका उच्च भेगहरु खोडपे, सतबाज, श्रीभावर, दार्चुलाको ब्यास क्षेत्र, दुहु त्यसैगरी बझाङ्का उच्च भेग, देउलेक, बित्थड, र डडेल्धुराको स्याउले, भालुमारे लगायतका क्षेत्रमा भारी हिमपात भएको छ … Read more